Cajaladda: Muhiimadda Falanqeynta Bixinta Gaadiidka Maamuleed Google Analytics
Ma baaray Google Analytics oo ogaaday in waxyaabo aan la hubin ay dhacayaan? Waa hagaag, waxay ku dhacdaa dhammaanteen, sidaas darteed maahan wax cusub. Waxaa jira waqtiyo aan ku sameyno qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira boggeena oo aan bedelno naqshadeynta ama qaabeynta, laakiin natiijooyinka ma aha sidii la filayay. Waxyaabahan oo dhan waxay saameyn karaan booqashooyinkaaga iyo tayada aad leedahay gaadiidka boggaaga - auto puesivahatamine. Xaaladahan oo kale, waa inaad ka taxadartaa gaadiidka admin ee Google Analytics, tanina waa la sameyn karaa markaad isticmaasho noocyo kala duwan oo WordPress ah. Haddii aadan isticmaalin plugin, ka dibna waa inaad sameysaa waxaas gacanta. Google Analytics wuxuu kuu ogolaanayaa inaad baabuurka raaciso markaad ka saarto cinwaanka IP-gaaga ama ka saarida gaadiidka adiga oo isticmaalaya "cookies content"
Inta badan waxaa la rumaysan yahay in habka ugu horreeya uu ka fiican yahay oo dhameystiran habka labaad. Lisa Mitchell, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semmat , ayaa sheegaya in haddii aad haysato cinwaanada IP-ga oo si toos ah loo abuuray ama haddii aad isticmaaleysid laptop ama qalab dukaan kafeega ah, waa inaad joojisaa booqashadaada lagu tiriyo Google Analytics. Labada hababkaasi waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido u gaar ah, waxaana la dooran karaa iyada oo ku saleysan shuruudahaaga
Ka reeb IP cinwaankaaga
Habkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso Google Analytics hab wanaagsan. Taasi waxay kaa caawineysaa inaad hagaajiso tayada gaadiidkaaga, waxaad joojin kartaa aragtidaada cinwaanada IP-ga ama IP-yada. Si kastaba ha ahaatee, tan waxaa la sameyn karaa oo keliya markaad isticmaaleysid kombiyuutarka oo aad diyaar u tahay inaad bedesho goobaha ka soo jeeda qalabkaas. Haddii aad ka baxdo xafiiska ama aad ka baxsan tahay gurigaaga, habkani ma bixin karo wax faa'iido ah. Xaaladdaas, waa inaad isku daydaa inaad isticmaasho habka labaad. Marka laga reebo taraafikada IP-yada gaarka ah, waa inaad sameysaa shaandhado gaar ah oo falanqeynaya tayada gaadiidkaaga si habboon. Ku gal koontada Google Analytics kaddibna guji ikhtiyaarka goobaha ku yaal dhinaca midigta sare. Kadibna waa inaad ku cadaadisaa xulashada filinka cusub oo ku dar faahfaahin sida magaca filter, nooca filterka, cinwaanka IP, iyo kuwa kale.
Ka fogow taraafikada Mawduuca Qashinka